द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | डीसी 17, 2020 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
तपाईंको व्यावसायिक खर्चहरूको प्रतिपूर्तिका लागि विवरणहरू र नि: शुल्क मोडेल पत्र। ती सबै तपाइँको मिशनहरूमा खर्च गर्छन्। को आवश्यकता र गतिविधिहरूको लागि तपाईको व्यवसाय उसको जिम्मेवारी हो। श्रम कानूनले प्रदान गर्दछ, समर्थन कागजातहरूको प्रस्तुतीकरणमा वा सपाट-दर भत्ताको रूपमा, जुन तपाईंले उन्नत गर्नुभएको रकमको लागि फिर्ता पाउनुहुनेछ। यद्यपि उपचार प्रक्रिया कहिलेकाँहि दुख्ने र समय खपत हुने हुन सक्छ। यसैले आफैलाई व्यवस्थित गर्ने र तपाईको पैसा फिर्ता हुन्छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्। यस्तो सम्भावना छैन कि तपाईका बारे अरुले चिन्ता लिनेछन्।
बिभिन्न किसिमका ब्यापार खर्चहरू के हुन्?
समय-समयमा तपाईं आफ्नो कामको क्रममा व्यापार खर्चको अधीनमा हुन सक्नुहुन्छ। यी आवश्यक खर्चहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नो कर्तव्यहरूको प्रदर्शनको बखत अगाडि बढ्नुपर्दछ र जुन तपाईंको गतिविधिको प्रदर्शनसँग सम्बन्धित छ। धेरै जसो खर्च रिपोर्टहरू कम्पनीको जिम्मेवारी हुन्।
तथाकथित पेशेवर खर्चले विभिन्न पक्ष लिन सक्दछ, जुन मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्णहरू:
यातायात लागत: जब विमान, रेल, बस वा ट्याक्सी बाट मिसनको लागि यात्रा वा पेशेवर बैठकमा जानको लागि;
माइलेज लागत: यदि कर्मचारीले एउटा व्यवसाय यात्राको लागि आफ्नै गाडी प्रयोग गर्दछ (माइलेज स्केल वा होटेल रातहरू द्वारा गणना गरिएको);
खानपान लागत: व्यापार लंचको लागि;
व्यावसायिक गतिशीलता लागत: स्थिति परिवर्तनसँग जोडिएको जुन निवास स्थानमा परिवर्तन हुन्छ।
त्यहाँ पनि छ:
टेलिworking्कि costs लागत,
NTIC उपकरणहरू प्रयोग गर्ने लागत (नयाँ सूचना र सञ्चार प्रविधि),
रिड जानकारी कसरी समिकरण गर्न सिक्नुहोस्, यो प्राप्त गर्न सबै सुझावहरू
व्यावसायिक खर्चको प्रतिपूर्ति कसरी गरिन्छ?
खर्चको प्रकृति जेसुकै होस्, खर्चको प्रतिपूर्तिका लागि नियम र सर्तहरू दुई रूप लिन सक्दछन्। या त तिनीहरू रोजगार सम्झौताको लागि प्रदान गरिएको छ, वा तिनीहरू कम्पनीमा अभ्यासको एक हिस्सा हो।
भुक्तानी वास्तविक लागतको प्रत्यक्ष प्रतिपूर्ति द्वारा गर्न सकिन्छ, त्यो भनेको सबै भुक्तानी गरिएको हो। यी टेलिभि costs लागत, आईसीटी उपकरणको प्रयोग, व्यावसायिक गतिशीलता, वा विदेशमा पोस्ट गरिएका कर्मचारीहरूले खर्च गरेकोमा सम्बन्धित छ। त्यस्तै रूपमा, कर्मचारीले आफ्नो विभिन्न व्यय रिपोर्टहरू आफ्नो रोजगारदातालाई हस्तान्तरण गर्दछ। तिनीहरूलाई कम्तिमा तीन वर्षसम्म राख्न निश्चित गर्दै।
यो पनि सम्भव छ कि तपाईंलाई एक सामयिक वा आवधिक फ्लैट-दर क्षतिपूर्ति दिइनेछ। यो विधि आवर्ती लागतहरूको लागि अपनाईन्छ, उदाहरणका लागि, वाणिज्यिक एजेन्टको लागि। यस अवस्थामा, उत्तरार्द्धले आफ्नो खर्चको औचित्य प्रमाणित गर्न बाध्य छैन। छत कर प्रशासन द्वारा सेट गरिएको छ र लागत (भोजन, यातायात, अस्थायी आवास, हटाउने, माइलेज भत्ता) को प्रकृति अनुसार फरक हुन्छ। यद्यपि, यदि सीमा नाघ्यो भने, रोजगारदातालाई तपाइँका सहयोगी कागजातहरू आवाश्यक पर्न सक्छ। यो नोट गर्नुपर्दछ कि कम्पनी निर्देशकहरू यस निश्चित भत्ताको हकदार छैनन्।
पेशेवर खर्चको प्रतिपूर्ति दाबीको लागि प्रक्रिया
सामान्य नियमको रूपमा तपाईको व्यावसायिक खर्चको प्रतिपूर्ति लेखा विभाग वा मानव संसाधन प्रबन्धकलाई सहयोगी कागजातहरू पेश गरे पछि गरिनेछ। ब्यालेन्स सामान्यतया तपाईंको अर्को भुक्तानी पर्चीमा देखा पर्नेछ र रकम तपाईंको खातामा हस्तान्तरण हुनेछ।
तपाईंको व्यावसायिक खर्चहरूको प्रमाण प्रदान गर्न तपाईंसँग disposal बर्ष छ। यस अवधि पछाडि, तपाईंको मालिक अब उनीहरूलाई भुक्तान गर्न बाध्य छैन। यदि गल्तीले वा बिर्सिएमा वा जे पनि कारणले गर्दा हामी तपाईंको पैसा फिर्ता गर्दैनौं। तपाईको कम्पनीलाई फिर्ता माग गर्न पत्र पठाउँदै द्रुत हस्तक्षेप गर्नु उत्तम हो।
रिड एक पत्र देखि एक पेशेवर इमेल फरक
तपाईंलाई मद्दतको लागि, यहाँ तपाईंको अनुरोध गर्न दुई नमूना पत्रहरू छन्। जे भए पनि। सबै भन्दा माथि, मूल समर्थन कागजातहरू संलग्न गर्न निश्चित गर्नुहोस् र आफ्नो लागि प्रतिलिपिहरू राख्नुहोस्।
व्यावसायिक खर्चको प्रतिपूर्तिको लागि सामान्य अनुरोधको लागि पत्रको उदाहरण
अन्तिम नाम प्रथम नाम कर्मचारी
कम्पनी ... (कम्पनी नाम)
(शहर), मा ... (मिति),
विषय: व्यावसायिक खर्चको प्रतिपूर्तिको लागि अनुरोध
मेरो पछिल्लो मिसनहरु को लागी खर्च पछि। र अब मेरो पेशेवर खर्चको प्रतिपूर्तिबाट फाइदा लिन चाहन्छु। प्रक्रियाको आधारमा म तपाईंलाई मेरो भुक्तानीहरूको पूर्ण सूची पठाउँदैछु।
यसैले मैले हाम्रो कम्पनीको विकासको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कन्फरेन्सहरूमा भाग लिन _____ बाट _____ (यात्राको मिति) बाट _____ (व्यापार यात्राको गन्तव्य स्थान) बाट यात्रा गरें। मैले त्यहाँ यात्रा गरें र मेरो यात्राको क्रममा पछाडि थुप्रै ट्याक्सी सवारी गरें।
यी खर्चहरू बाहेक, मेरो होटेल आवास खर्च र मेरो खाना खर्चहरू थपिएका छन्। मेरा सबै योगदानहरूलाई प्रमाणित गर्ने समर्थन कागजातहरू यस अनुरोधसँग जोडिएका छन्।
तपाइँबाट अनुकूल प्रतिक्रियाको लागि पेन्डि, गर्दै, म तपाईलाई, महोदय, मेरो आदरणीय अभिवादन प्राप्त गर्न अनुरोध गर्दछु।
रोजगारदाताले अस्वीकार गरेको खण्डमा व्यवसायिक खर्चको प्रतिपूर्ति अनुरोध गर्ने चिठीको उदाहरण
विषय: व्यावसायिक खर्चको प्रतिपूर्तिको लागि दावी गर्नुहोस्
मोन्सिएर ले डायरेक्टीर,
मेरो कर्तव्यको एक भागको रूपमा, मैले विदेशमा धेरै व्यापारिक यात्राहरू गर्नुपर्‍यो। एक कर्मचारीको रूपमा, म [दिनको लागि मेरो स्थानसँग सम्बन्धित विशिष्ट अभियानहरूको लागि गएको थिएँ।
मेरो लाइन प्रबन्धकको अनुमति संग, म मेरो गाडी संग यात्रा। मैले कूल [संख्या] किलोमिटर यात्रा गरिसकेको छु। यसमा खानाको लागत र होटलमा धेरै रातहरू थपिन्छन्, जम्मा [रकम] यूरोको लागि।
कानूनले यी व्यावसायिक खर्चहरू कम्पनीले वहन गर्नुपर्दछ भनेर आदेश गर्दछ। यद्यपि, सबै आवश्यक समर्थन कागजातहरू मेरो फिर्ताको पछि लेखा विभागलाई दिइएको थियो भन्ने बावजुद, म अझै पनी मसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्राप्त भएको छैन।
यो कारण यो हो कि म तपाईंलाई हस्तक्षेप गर्न भन्दछु ताकि म जति सक्दो चाँडो फिर्ता लिन सकिन्छ। तपाईंले मेरो अनुरोधलाई जायज ठहर्याउने सबै इनभ्वाइसहरूको एक प्रतिलिपि फेला पार्नुहुनेछ।
तपाईंको मद्दतको लागि अग्रिम धन्यवाद दिँदै कृपया, कृपया स्वीकार्नुहोस्, श्री निर्देशक, मेरो उच्च विचारको आश्वासन।
डाउनलोड गर्नुहोस्-"नमूना-पत्र-एक-सामान्य-अनुरोध-को लागि प्रति-शुल्क-पेशेवर-खर्च.डॉक्स" को लागि "	उदाहरण को-एक-सामान्य-अनुरोध-को लागी प्रतिपूर्ति को-पेशेवर-खर्च.docx को उदाहरण - - 4582 पटक डाउनलोड गरियो - २१ Kb
रिड काममा हिज्जे गल्तीहरू प्रतिबन्धित गर्नुहोस्
डाउनलोड गर्नुहोस् "नमूना-पत्र-प्रति-प्रतिफल को-पेशेवर-खर्च-को-मामला-इन्कार-बाट-रोजगारदाता.डॉक्स" का मामला "	उदाहरण को-को-अनुरोध को लागी प्रतिपूर्ति को-पेशेवर-व्यय-को मामला को इन्कार-रोजगार- from- रोजगारदाता.डोकक्स को - उदाहरण times times पटक डाउनलोड गरियो - १ K Kb
पत्र टेम्प्लेट: व्यावसायिक खर्चको अनुरोध प्रतिपूर्ति जनवरी 8th, 2022Tranquillus
अघिल्लोके मसँग २०२१ मा पेनल्टी नगरी पेशेवर अन्तर्वार्ता स्थगित गर्ने अधिकार छ?
निम्नछुट्टिहरु र आराम दिन: सम्भावित लागू गर्न र उनीहरूको मिति परिवर्तन जुन 30०, २०२१ सम्म
एक अग्रिम वा निक्षेप अनुरोध गर्न पत्र टेम्पलेट
तपाइँको मेलबक्समा अनुपस्थिति सन्देशमा ध्यान दिनुहोस्
काममा हिज्जे गल्तीहरू: तपाईंलाई पढ्नेहरूले तपाईंलाई कसरी बुझ्ने बनाउनुहुन्छ?
व्यावसायिक मेल: सामान्य कलिंग फारमहरूका लागि केही नियमहरू